नयाँ नेपालको नयाँ प्रेमपत्र | Freeing My Mind
नयाँ नेपालको नयाँ प्रेमपत्र
भित्ते राष्ट्रपतिको संज्ञा दिने सबै राजनीतिक पार्टीलाई धुलो
चटाउँदै हाम्रा कमरेड प्रचण्ड भित्तामा नभई वास्तवमै नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने सम्भावना
बढेको छ। जनताले परिवर्तनको पक्षमा भोट गरेका छन् , देश युगान्तकारी परिवर्तन तर्फ उन्मुख
हुँदैछ। हिजो माओवादीको खेदो मात्र खन्ने सञ्चार माध्ययम पनि अहिले हाम्रै महिमागानमा
तल्लिन छन्। तिमी त समाचारको किरो, सुनेकै हौला। देशलेे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
क्षेत्रमा काँचुली फेरिरहेको बेलामा हाम्रो प्रेम पनि यथास्थितिवादीको कथा नबनोस् भन्ने हेतुले म
यो पत्र कोर्‍र्दै छु। प्रेम परम्पराको अध्ययन गर्दा प्रेम पत्रलेखन पनि पुरुषहरुकै विभागीय काम
भएता पनि मलाई त्यो परम्परा तोड्दा कुनै दुख छैन। अरु पार्टीले हार्ने ठाउँमा र हाम्रोले
सकेसम्म महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएता पनि जित हाम्रै वर्गको भयो। त्यही जितको स्वाद
लिँदै म आफ्ना ‘वैज्ञानिक’ तर्कद्वारा हाम्रो प्रेममा परिवर्तनको आवश्यकता औंलाउने चाहन्छु। कुरा
तर्क सङ्गत लागे जित हाम्रै हुनेछ, नलागे हार पनि हाम्रै। यस पत्रले हामी बीच वैमनश्यता ल्याए
त्यसको जिम्मेवारी पनि म कमरेड माधवकुमार नेपालले जस्तै यस प्रेमबाट राजीनामा दिएर
हाम्रा अनगन्ती (बुर्जुवा ) कफी गफमा धेरै विषयमा मतमतान्तर भए। कहिले मैले (मेरा तर्क)ले
जिते कहिले तिम्रा तर्कले मलाई हराए। जित सधैं तर्ककै भयो। तर प्रेम बेलाबखतमा तर्कभन्दा
धेरै टाढाको कुरा हुँदोरहेछ। दिमागी तर्कले हृदय पगाले पनि हृदयको भाषा मस्तिष्कले बुझ्न
सक्दोरहेनछ। प्रचण्डपथमा हिड्न बरु सजिलो हेर, प्रेम गर्न त निकै गाह्रो रहेछ। सायद त्यसैले
हाम्रा भावुक कमरेड प्रचण्डले पनि मन दह्रो पारेर १० वर्ष जनताका छोरा (सेना) मार्न हामी
जस्तालाई तालिम दिन पछाडि परेनन्। नत्र त के थाह, हामी वाई.सी.एल सबै विकासानन्दका
शिष्य जस्तै काठमाडौंका सडकका खम्बा र भित्तामा प्रेमवाद लेख्दै पो हिंड्थ्यौं कि?सम्भावनाहरु
धेरै छन् तर वास्तविकता यहि हो किः म एक सर्वहारा वर्गकी (जनयुद्ध ताका) माओवादी छापामार
जहारा र तिमी देश विदेश खाई बुर्जुवा शिक्षा प्राप्त काङ्ग्रेस युवक आकाश बीच प्रेमको सम्बन्ध छ।
अनि प्रेम भन्ने कुरा सहमतिको सरकार जस्तै हुँदो रहेछ। विचारले जिती व्यवहारमा परिवर्तन
ल्याए मात्र टिक्न सकिने नत्र फेरि डामाडोल। स्वाध्यायन गरेपनि मेरो वास्तविकता एस.एल.सी
पीडित नै हो त्यसैले यस्ता कुरामा त तिमीले पो बुझ्नुपर्ने।तर बितेका केहि दिनमा म तिमीमा
निकै बदलाव देख्दै छु। तिमीले यस्ता कुरा बुझेपनि बुझ पचाएको वा स्वाङ पारेको जस्तो
लाग्छ।बोल्न चाहदैनौं, फोन उठाउँदैनौं, भेट्नेको नाम सम्म लिँदैनौ। छापामारको कथा लेख्ने
भन्थ्यौ , साम्रगी सङकलन भइसकेकाले त्यसो गरेको हो भने भन। तिम्रो अतुलनीय अभिनयको
म तारिफ गर्ने छु। अरु समस्या भए हाम्रा कमरेड प्रचण्ड जस्तो मुखैमा भन, माकुने जस्ता कुरा
टेंडा कुरा गर्दाको परिणाम त तिमीले देखि हाल्यौ।
हाम्रो दल र सरकार बीच भएको १२ बुँदे सम्झौता पछिको नेपालको स्थिति याद छ?आशावादी हुने
स्थिति के बन्दै थियो देशमा हिंसाको लहर चल्यो। मधेसी आन्दोलन, जातीय आन्दोलन, धार्मिक
मुठभेड कति धेरै समस्या। प्रेमको स्वीकार्यता पनि त्यही १२ बुँदे सम्झौता जस्तो मात्र हो। स्वीकार
गर्दैमा प्रेमको बिरुवा ,अरु केही नगरी बढ्दैन। सम्झौता पछिको समयमा हामी वाईं सी.एललाई
केही विध्वंस नगरी बस्नु ‘हरकुलियन टास्क’ थियो। आफ्नो बारेमा मात्र सोचिरहेको मान्छेलाई
पनि प्रेममा पर्दा त्यस्तै हुन्छ। तर समस्या छ भन्दैमा गिरीजाबाबुले हार मानेको भए के हुन्थ्यो?
यो संविधानसभा त के हामी पनि घुमी फिरी रुम्जाटार भनेझै जङ्गल पलायन हुन्थ्यौं होला।
समस्यालाई एक एक गरि समाधान गरेर नै आज यो देश युगान्तकारी मोडमा उभिएको छ।
कुहिएको स्वाउलाई पहिलेकै ताजा अवस्थामा ल्याउन सकिँदैन। जनताले त्यो बुझे र माओवादी
नयाँ स्याउको एउटै विकल्प भयो। काङग्रेस र एमाले ले त पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी राख्ने प्रयास
सम्म पनि गरेनन्। त्यही पुराना मान्छे, त्यही खोक्रो सिद्धान्त। परिवर्तन सिर्जनशील हुन्छ,
त्यसले नयाँ बाटो कोरेर हिँड्दछ। प्रेममा पनि मान्छे सिर्जनशील भएन भने त्यो एकलाई अर्काको
बानी परेको जस्तो मात्र हुन्छ। सम्बन्ध कुहिएको स्वाउ जस्तो भए सम्बन्धविच्छेद बाहेक विकल्प
रहँदैन। सुन्तला खोजेको बेला स्वाउमै अल्मलिएको हो भने पनि त्यो बुझिहाल्नुपर्छ। उदाहरणका
लागि स्वाउ र सुन्तला भनेपनि मान्छे वस्तु हैन, ऊ त भावनाले ओतपे्रात सजीव प्राणी हो।
एउटालाई खोज्नु तर अर्को सँग अल्भि्कनु त्यसैले निकृष्ट काम हो। म त छापामार मान्छे , कति
यहि हातबाट मरे कति कमरेडलाई यहि हातले बचाए। मलाई मृत्यु बरु स्वीकार्य छ, पे्रममा
तडपाएर मृत्युतुल्य जीवन अस्वीकार्य।
हाम्रो प्रेमको समस्या यी मध्ये कुन हो वा अरु केही भए स्पष्ट भन। म यो प्रेमलाई एक्लै मलजल
गर्दागर्दा थाकिसकेँ। अब त तिमीलाई एकोहोरो फोन गर्दा पनि कतै आफै तिमी पछाडी पागल
जस्तो लागिपरेको त होइन भनेर प्रश्न गर्दछु। त्यही पनि मन न हो, तिम्रोे एक बोलाईमा म
संसार छाडेर आउनसक्छु। हिन्दी फिल्म जस्तो सुनियो होला तर प्रेम भन्ने कुरा नै सधै्र फिल्मी,
‘लार्जर द्यान लाइफ’ अनुभव हुँदो रहेछ। तिमीलाई खै के लाग्छ? मेरो चाहना त केवल प्रेममा
सहअस्तित्व र सहकार्य होस् भन्ने हो। प्रेममा हुँदा पनि एक्लो हुनु त भीडमा पनि एक्लो अनुभव
गर्नुभन्दा पीडादायी हुँदोरहेछ। म आफूलाई त्यति दुख दिन सक्दिन। तिमीबाट पनि जानी–नजानी
त्यसो नहोस् भन्ने चाहना छ।
यो पुरानो ‘लभ यू’ भनेर सिद्धिने प्रेममा तिमीले पनि परिवर्तन हुनुपर्ने प्रशस्त ठाउँ देखे हात अघि
बडाउ। जनताको कसम, कहिले साथ छाड्नेछैन। नत्र यो क्षणसम्मको सहयात्री बनेकोमा धन्यवाद।
चुनावमा त ‘हार्न हामी जान्दैनौं, हार्‍यौं भने छाड्दैनौं’ सम्म पनि भनियो तर प्रेममा कहाँ
भन्नसक्नु, जबरजस्ती गरे आफ्नै जिन्दगीको सवाल छ! 🙂 देश परिवर्तनका लागि एक भएको
क्षणमा तिम्रो जिन्दगीमा पनि सोचेजस्तो सकारात्मक परिवर्तन आवोस्। यो नयाँ वर्षका प्रत्येक
दिनले तिम्रो जीवनमा खुसी र उमङ्गका रङ्ग छरुन्।
तिम्री उही कमरेड जहारा
Posted in Nice talkin to me and tagged loveletters, new nepal on April 14, 2008 by Darshan.2Comments
I wonder how and what ‘new’ Nepal emerges now—
But this writing was very good.
cool!! kati ramro love letter lekheko ni! I think you are one of those too few people I see in blogs, who has honestly expreseed the reality through this love letter. I am sharing my flat with one Maoist Army and one Nepali Army. I will also write if I get anything interesting about them….
Chhatima hat rakhera lekheko raichha, ramro lagyo..